WARBIXIN: Dadka Soomaalida in 82 % Ay yihiin Dad been badan | Jubbaland Media Online
WARBIXIN: Dadka Soomaalida in 82 % Ay yihiin Dad been badan
Posted on March 10, 2016 in Opinions, Wararka // 1 Comment
Waa dadweyne ku sugan Xeebta Liido ee Muqdisho
Shacbiga Soomaaliyeed waxaad Ogaataan haddii aad rabtan in aad heshaan Dowlad Wanaagsan waa in aad beenta iska dhaaftaan Bal fiiriya Cadeeynta hoos ku qoran.
Waxan soo Qaatey laba Waraaq oo nooca la yirahdo A 4 iyo Laba Qalin mid uu yahay Bulug midna uu yahay Gaduud ka dib wareysi ayaan ka qaaday 100 Qof Soomaali ah oo si fiican aan u Garanaayo oo ku nool Nairobi waxayna isugu jireen Rag iyo Dumar, Wareysigaas oo ahaa mid si qarsoodi ah u Wareysanaayay Qof kaaste, laakiin qofka ma usan ogeyn in aan Xaqiiqda jirta aan ogahay Aniga.
Wareysiga Qof kaste waxan weydiyay Hal su,aal ah oo ku saabsan arrin markaas isaga ku saab saneyd, waxa dhacday in 100 Qof ee aan wareystay in 82 Qof oo ka mid ay been ii sheegen , Halka 12 Qof oo ay ii sheegen Run iyo Been isla socda, Halka 6 Qof oo ka mid ah ay Runta sida ay tahay igu sheegen.
Waxaan Ogaadey in Dadka Soomaalida ah 82 % ay yihiin Dad been badan, halka 12 % ay yihiin Dad Been iyo Run Isla socda isla sheega, Halka 6% ay yihiin Dad Runta Sheega.
Waxan halkaan ka cadeeynaya in 100 Qof aan wareeystay in mid walba aan weydiyay arrin isaga u gaar aheyd waxaana weydiiyay Qof walba hal su, aal ah, waxa ka mid ah su, aalaha Qaarkood, : Hadda ma shaqeysa? Maxay tahay Shaqadaada ama xirfadaada? Ma Guursatey hadda ka hor? Hadda Xaas ma leedahay ama Qof madax banaan miyaad tahay? UNHCR Dib u dejin miyay ku siisey? Nin kaaga xagee jira? Ma Dalka Canada miyaad ka timid? Imisa Xaas ayaad leedahay ? Shalay Xageed aaday? Xalay xageed joogtay? Nin kaas Hebel la yirahdo Ma garaneysa? Gabadhaas Heblaayo la dhaho Ma Garaneysa? iyo su,aalo kale oo badan oo halkaan aan ku soo koobi karin oo garay 100 su,aal kala nooc ah.
Waxa igu yaabka badna waa laba nin oo aan saaxiibo aheyn oo weliba aan isku process aheyn oo labad mid ka mid ah wuxuu ahaa wariye caan ah oo Soomaalida taqaaano,
Marka waxa dhacdey in labadooda mid walba in Marki la gaarey maalinta u baxayay wuxu igu dhahay: Saaxiib Daahir Weli waxba ma hayno ee Safar keyga Mareykanka weli la ima sheegin: Nasiib wanaag Aniga waan ogaa Taariikhda ay baxaayaan mid walba laakiin iyaga waxay moodaayeen in aan ogeyn, hadda labadaas Qof waxay kala jooggan Gobolka California iyo Gobolka Minnesota, waxayna maqan yihin muddo Bil wax ka yar.
Waxan Dadka Soomaalida ah kula Talin laha in ay Beenta iska daayaan, maxaa yeeley Beenta waa shey xun tan kale Runta waa shey Qaali ah oo ka Qiimo badan Aduunka aad ku Nooshahay ee Ogow Runta Allah ayaa kugu Jecel.
Dadka Soomaalida in 82 % Ay yihiin Dad been badan
1 Comment on WARBIXIN: Dadka Soomaalida in 82 % Ay yihiin Dad been badan
Beenaale // March 10, 2016 at 9:46 pm // Reply
Saaxiib adigu qaybteed ku jirtaa warkaagase yaa huba,sxb fikir intaadan qorin.